အခုချိန်ထိပြည်သူ အားလုံးဖက်က ရပ်တည်ပေးပြီး CDMမှာပါဝင်ပေးနေကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေ အားလုံးကိုဦးညွှတ်ပါတယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Cele Posts
နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသုက လက်ရှိမှာတော့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကိုရရှိဖို့နဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ထားတဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရွေးကောက်ခံအစိုးရအဖွဲ့ကို အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့ခင်ပွန်း ဒါရိုက်တာဏကြီးကတော့ စစ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ဝရမ်းထုတ် တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရပေမယ့် ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ သူမလုပ်စရာ ရှိတဲ့ အလုပ်တွေကို ဖိဖိစီးစီးလုပ်ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ပိုင်ဖြိုးသုကပြည်သူအားလုံးဖက်က ရပ်တည်ပေးပြီး CDMမှာ ပါဝင်ပေးနေကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေအားလုံးကိုဦးညွှတ်ကြောင်း ပြောလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပိုင်ဖြိုးသုက “သူတို့တကယ် ကြောက်တာ CDM ပါ…. သူတို့ကို တကယ်ဖြုတ်ချနိုင်တာလည်း CDM ပါ….ဒါကြောင့်လည်း CDM ပါဝင်ပေးသူတွေနဲ့ CDM အားပေးတဲ့သူတွေကို ပစ်မှတ်ထား လိုက်ဖမ်းတာပါ …(သူတို့ဘယ်လောက်ကြောက်လည်းသိသာပါတယ်.. ဖမ်းဝရမ်းတွေထုတ်… ညဖက် အင်တာနက်ဖြတ်ပြီးလိုက်ဖမ်း…ကျွန်မတို့တွေညဖက်မှာကျီးလန့်စာစားဖြစ်ရသလို သူတို့လည်းညဖက်ဆိုမပဋာမြေလူးပါပဲ) အခုချိန်ထိပြည်သူအားလုံးဖက်က ရပ်တည်ပေးပြီး CDMမှာပါဝင်ပေးနေကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေ အားလုံးကိုဦးညွှတ်ပါတယ် 🙏 ကျွန်မတို့အပေါ် CDM heroesတွေရဲ့ကျေးဇူးကြွေးတွေ တင်နေပါပြီ 🙏🙏🙏” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။
ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ CDMမှာ ပါဝင်ပေးနေကြတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ အားလုံးကို Hero တွေလို့ကို တင်စားပြီး လေးစား ဦးညွှတ်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက္ပါတယ်နော်။
အခုခြိနျထိပွညျသူ အားလုံးဖကျက ရပျတညျပေးပွီး CDMမှာပါဝငျပေးနကွေတဲ့သူရဲကောငျးတှေ အားလုံးကိုဦးညှတျပါတယျလို့ ဆိုလာတဲ့ ပိုငျဖွိုးသု
နိုငျငံကြျော သရုပျဆောငျ ပိုငျဖွိုးသုက လကျရှိမှာတော့ မွနျမာ့ဒီမိုကရစေီ စနဈကိုရရှိဖို့နဲ့ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျး ထားတဲ့ နိုငျငံတျော သမ်မတကွီး၊ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနဲ့ ရှေးကောကျခံအစိုးရအဖှဲ့ကို အမွနျဆုံးလှတျပေးဖို့ တောငျးဆိုနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပိုငျဖွိုးသုရဲ့ခငျပှနျး ဒါရိုကျတာဏကွီးကတော့ စဈအစိုးရအဖှဲ့ရဲ့ ဝရမျးထုတျ တရားစှဲဆိုခွငျးခံထားရပမေယျ့ ပိုငျဖွိုးသုကတော့ သူမလုပျစရာ ရှိတဲ့ အလုပျတှကေို ဖိဖိစီးစီးလုပျကိုငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာတော့ ပိုငျဖွိုးသုကပွညျသူအားလုံးဖကျက ရပျတညျပေးပွီး CDMမှာ ပါဝငျပေးနကွေတဲ့သူရဲကောငျးတှအေားလုံးကိုဦးညှတျကွောငျး ပွောလာတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ပိုငျဖွိုးသုက “သူတို့တကယျ ကွောကျတာ CDM ပါ…. သူတို့ကို တကယျဖွုတျခနြိုငျတာလညျး CDM ပါ….ဒါကွောငျ့လညျး CDM ပါဝငျပေးသူတှနေဲ့ CDM အားပေးတဲ့သူတှကေို ပဈမှတျထား လိုကျဖမျးတာပါ …(သူတို့ဘယျလောကျကွောကျလညျးသိသာပါတယျ.. ဖမျးဝရမျးတှထေုတျ… ညဖကျ အငျတာနကျဖွတျပွီးလိုကျဖမျး…ကြှနျမတို့တှညေဖကျမှာကြီးလနျ့စာစားဖွဈရသလို သူတို့လညျးညဖကျဆိုမပဋာမွလေူးပါပဲ) အခုခြိနျထိပွညျသူအားလုံးဖကျက ရပျတညျပေးပွီး CDMမှာပါဝငျပေးနကွေတဲ့သူရဲကောငျးတှေ အားလုံးကိုဦးညှတျပါတယျ 🙏 ကြှနျမတို့အပျေါ CDM heroesတှရေဲ့ကြေးဇူးကွှေးတှေ တငျနပေါပွီ 🙏🙏🙏” ဆိုပွီး ပွောလာပါတယျ။
ပိုငျဖွိုးသုကတော့ CDMမှာ ပါဝငျပေးနကွေတဲ့ သူရဲကောငျးတှေ အားလုံးကို Hero တှလေို့ကို တငျစားပွီး လေးစား ဦးညှတျလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုက်ပါတယျနျော။